हिन्दुराज्य र राजतन्त्रको बिसयलाइ लिएर यस्तो भने काँग्रेसका नेता खड्काले, हेर्नुहोस के भन्छन – TAJA KHAWAR
हिन्दुराज्य र राजतन्त्रको बिसयलाइ लिएर यस्तो भने काँग्रेसका नेता खड्काले, हेर्नुहोस के भन्छन
October 14, 2018 Taja Khawar राजनीति 0
काठमाडौँ : नेपााली कांग्रेसका नेता दीपक खड्काले जनताले चाहे हिन्दूराज्य र संवैधानिक राजतन्त्रको विषयमा छलफल हुनसक्ने बताएका छन् । उनले यदि जनदबाब परेमा यसमा छलफल गर्न आफ्नो पार्टी पनि बाध्य हुने स्पष्ट पारेका छन् । आफूहरुलाई प्रतिपक्षमा बस्न जनताले भनेको कुरालाई सहर्ष स्वीकार गरेको खड्काले बताए ।
‘जनताको सुख, सुविधा र हामीले निर्माण गरेको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई नेपाली कांग्रेसले जहिले सरकारलाई सहयोग गर्छ’, उनले भने, ‘सहयोग रहिरहन्छ भन्ने कुरा हाम्रो उद्घोष हो । आज पनि नेपाली कांग्रेस त्यो उद्घोषभन्दा पछाडि छैन ।’
उनले ओली नेतृत्वको सरकारलाई अत्यन्तै बलियो भन्दै गर्दा सरकारसँग आशा पनि त्यही स्तरको हुने बताए । ‘नेपाली कांग्रेसले यो सरकारलाई स्वागत गर्छ । र, आशा पनि गर्छ । किनकी बलियो सरकार नेपाली कांग्रेसको पनि चाहना हो’, खड्काले भने, ‘संसदीय व्यवस्थाभित्रको विजयमा यस्तो बलियो सरकार भइरहँदा तमाम जनताका आशा र इच्छा हुन्छन् । अब हाम्रो मुलुक समृद्ध बन्नसक्छ । र, हामीले चाहेजस्तो मुलुक बनाउन सक्छौं भन्ने जनताको जुन आशा हो, त्यो आशामाथि तुषारापात हुन सुरु गरेको छ ।’
हत्या, हिंसा, बलात्कारमा सरकारको हात छ भन्ने कुरा पछिल्लो समय प्रष्ट हुन थालेको पनि उनले गम्भीर आरोप लगाए । उनले भने,‘वास्तवमा प्रधानमन्त्री आँफै भनिरहनुभएको छ की सरकार कसले चलाइरहेको छ भनेर ? अब यति निरिह, यत्रो दमदार, जनताको म्याण्डेट पाएको दुईतिहाइ बहुमत भएको सरकारका प्रधानमन्त्री यति निरिह हुन मिल्छ ? आश्चर्य लागेको छ ।’
खड्काले कम्तिमा बलात्कारमा, हत्या, हिंसामा, भ्रष्टाचारमा, आतंकमा सरकारको हात छ भन्ने कुरा सुन्न नपाइयोस् भन्दै सरकारप्रति कटाक्ष गरे । उनले संविधान संशोधनको विषय चलिरहेकोले संशोधन गर्नुपर्ने जति सबै कुराहरु संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
‘संविधान बनाउँदै गर्दा म पनि त्यसको सदस्य थिएँ । जनताले आज गाउँमा प्रश्न गर्न थालेका छन् । तपाईहरुले हिन्दू राष्ट्रको विषयमा किन सोध्नुभएन भनेर ? अब यसको छलफल पनि हुन जरुरी छ’, खड्काले भने, ‘जनताले यसबारे आफ्नो अभिमत प्रकट गर्न पाउनुपर्छ भन्ने विषय अब चर्चाको विषय बन्न सक्छ । त्यसकारण सरकार यस विषयमा पनि सजग रहोस् । र, छलफल गरोस् । पार्टीहरुलाई मिलाएर मुलुकको हित हुनेगरि हामीले सरकार सञ्चालन गर्दा कसको लागि गर्दछौं ?’
खड्काले संवैधानिक राजतन्त्रबारे पनि छलफल हुन सक्ने बताए । ‘संवैधानिक राजतन्त्रको विषयमा पनि छलफल नहोला भनेर म भन्न सक्दिन । तर, जनताले चाहे भने जुनसुकै विषय पनि छलफल हुन्छ’, खड्काले भने, ‘हिजोपनि जनताले चाहेर संविधान निर्माण भएको हो । जनताका आकांक्षाहरुमा केही कुराहरु छुटेका छन् भने अझ समावेश गर्नुपर्छ । हिन्दूराष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रको विषय मैले गाउँघरमा सुनेको हुँदा जनता यतातिर जानुको कारण हाम्रो कमजोरीले हो, या हिजो संविधानमा यो विषय छलफलको विषय नबनाइएको कारणले हो । म गाउँघरतिर घुम्दा जनताले यो विषयमा छलफल गर्न चाहन्छन् ।’
यति मीठो तरिकाले अमेरिकन दुतावासकी प्रवक्ताले गाइन् नेपाली गीत ‘सिरीमा सिरी’ (भिडियो हेर्नुस्)
यौनसम्पर्क सम्बन्धी यस्ता ७ अनौठा तथ्यहरु सुन्दा तपाइलाई अचम्म लाग्न सक्छ हेर्नुहोस